निर्मला पन्तको बलात्कार हैन सर्पले टोकेको हो भन्ने मेयरलाई के गर्ने सरकार? यस्तो छ पब्लिककाे जवाफ… भिडियो – PathivaraOnline
Home > भिडियो > निर्मला पन्तको बलात्कार हैन सर्पले टोकेको हो भन्ने मेयरलाई के गर्ने सरकार? यस्तो छ पब्लिककाे जवाफ… भिडियो
निर्मला पन्तको बलात्कार हैन सर्पले टोकेको हो भन्ने मेयरलाई के गर्ने सरकार? यस्तो छ पब्लिककाे जवाफ… भिडियो
admin September 16, 2018 भिडियो	0
काठमाडौं । कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १३ वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको परिवार अहिले न्याय खोज्दै सिंहदरबारको ढोका ढक्ढकाइरहेको छ । जिल्लामा रहँदा आफ्नो आवाज कसैले नसुनेपछि न्यायको गुहार माग्न राजधानी आउनु परेको पन्तका बुबा यज्ञराज र दुर्गादेवीको दुःखेसो छ । घटनामा प्रहरीले मुख्य अभियुक्तका रुपमा सार्वजनिक गरेका दिलिपसिंह विष्ट साधारण तारेखमा छुटिसकेका छन् ।
हैन यो नेपालको सर्प त कपडा उतारेर ढस्ने पनि हुदो रहेछ यो कुन् धुर्लप सर्प रहेछ खोजी गरेर अन्त राष्ट्रीयमा नाम लेखाउनु होस् मेयर साप ।
जस्ले सर्पले टोकेको भन्छनी तेसैले वा तेसको कोहि नातेदार ले गरेको हुनुपर्छ बलत्कार किनकी उसले सर्पले टोकेको भनेर कुरा मिलाउन लायको हो तेहि साला खातेलाइ समाय पछि तेसै ले नै भन्छ या बलत्कारी को बारेमा खुलाउछ ।
त्यो अपराधी को लिङ्ग छिनाउनुपर्छ। ताकी फेरि पनि अरु कसैले भुलेर नि एस्तो काम नगरोस् ।
म माथि पटक-पटक गुरुले बलात्कार गर्नु भयो!
मध्यरातमा बाहिरियो निर्मला हत्या काण्डको भिडियो सहित यस्तो रहस्य, कतिसम्म सहि हो-हेर्नुहोस भिडियो
फेरि फसे भुवन! यी यवतीले ‘स्क्रिन सट’ सार्वजनिक गर्दै खोलिन् पोल (भिडियो हेर्नुस्)
डेढ महिना भित्र पार्टी पुनः मिल्ने पुर्व मन्त्रीको खुलासा
कृष्णमाया भन्छिन् ‘मलाई करणी गर्नेले आधा सम्पत्ति दिनुपर्छ’
निर्मलाको ज्यान लिने अपराधीको बारेमा यस्तो सूचना प्रहरीलाई आएपछि…